Maraoka: Miaka-tsehatra Ny Gnaoua! · Global Voices teny Malagasy
(Fanamarihana: lahatsoratra efa nivoka tamin'ny volana Jolay 2008 ity adika eto ity)
Isan-taona amin'ny volana Jiona, mpizaha tany an'arivony avy amin'izao tontolo izao sy Maraokana manerana ny firenena no mirohotra ao Essaouira, tanàna kely amoron-tsiraka tokony ho 200 kilaometatra avy ao Marrakesh, mba hamonjy ny Fetiben'ny Gnaoua sy ny mozika manerantany. Toerana mafana isan-taona ho an'ireo mpanakanto Maraokana isan-karazany ny tanàna, izay lasa nalaza noho ny nataon-dry Rolling Stones sy Jimi Hendrix (lazaina fa nosoratana momba an'i Mogador ny Castles in the Sand), ary maresaka tanteraka mandritra ny fety. Tamin'ity taona ity, maro ireo bilaogoera nanatrika izany.
Manazava fohy ny tantaran'ny Gnaoua ny Moroccan Dream:
Nahasarika ireo mpiangaly mozika marobe tahaka an'i Jimmi Hendrix, Led Zeppelin sy ny hafa ny mozika Gnaoua. Mozika pentatonika (dimy tonom-peo) mitovy amin'ny mozika Blues ny Gnaoua satria samy avy ao am-pon'i Afrika izy roa tonta.
Lasa lavitra mihitsy aza i Jimmy Page sy Robert Plant mba hamorona ny No Quarter tamin'ny taona 1994. No Quarter dia fanakambanana ny mozika gnaoua sy rock, manaraka ny dian'i Randy Weston izay mpanakanto voalohany nanakambana ny mozikany jazz tamin'ny gnaoua tamin'ny taona 60.
Kimany Marley manao fampisehoana
Manatsonga ny talen'ny fetibe Neila Tazi mamaritra ny maha zava-dehibe ny fetibe ny View from Fez:
Natosiky ny fitiavanay mozika sy ny tena fihaonana, ny fanirianay hiaro ny tsy fananan-tsiny sasany sy ny nofy ao anatin'ny tontolo mangidy izahay. Mandritra ny efatra andro, mamorona tontolo miaraka amin'ny soatoavina inoanay izahay: ny fahatsorana sy ny zavatra fototra eo amin'ny fiainana.
Nizara lahatsoratra avy amin'ny Dr. Chouki El Hamel, manam-pahaizana manokana momba ny kolontsaina Afrikanina, tantara ara-kolontsain'ny gnaoua sy ny fiavian'ny fetibe ny Afropop, tranonkala natokana ho an'ny mozika Afrikanina manerantany:
Vao haingana, “nahita” ny mozikan'ny Gnawa ireo mpanakanto Tandrefana liana tamin'ny mozika nentim-paharazana Afrikanina. Vokatr'izany, nisy ny fiarahamiasa maro teo amin'ireo mpanakanto jazz malaza tahaka an'i Randy Weston. Nanavao ny endrik'izy ireo ny Gnaoua ary nanova izany ho laika kokoa sy manintona ara-barotra bebe kokoa. Noho ireo fivoarana vao haingana ireo sy ny fisarihan'izy ireo mpizahatany, nametraka ny Fetiben'ny Mozika Gnawa sy Manerantany tao Essaouira tamin'ny taona 1997 ny governemanta Maraokana.
Farany, Agadir Souss nizara lahatsary tamin'ny fetibe:
Sarin'i Kimany Marley avy amin'i Agadir Souss.